March 4, 2018 – Thutastar
ယောင်္ကျားလေးများကျရှုံးရတတ်တဲ့ မိန်းကလေးများ၏ ညို့ ချက် မာယာ များ
Comments Off on ယောင်္ကျားလေးများကျရှုံးရတတ်တဲ့ မိန်းကလေးများ၏ ညို့ ချက် မာယာ များ
ညို့ချက် (၁) တစ်ချို့ မိန်းမတွေက မျက်နှာကို ချိုချိုလေး လုပ်ထားတတ်တယ်။ အဲ့ဒါ ယောင်္ကျားတွေကို စွဲဆောင်တဲ့ နံပါတ်တစ် “သိတံ” လို့ ခေါ်တယ်။ (မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့ ရုပ်လေးတွေပေါ့ဗျာ) ညို့ချက် (၂) တစ်ချို့ကျတော့ အသံတိုးတိုးလေးတွေနဲ့ ရီပြတတ်တယ်။ အဲ့ဒါက ညှို့ချက် နံပါတ်နှစ် “ဟာသ” လို့ခေါ်တယ်။ (မကြားတကြားနဲ့ သတိထားရမယ့် ဆည်းလည်းသံလေးတွေပေါ့) ညို့ချက် (၃) တစ်ချို့ မိန်းကလေးလေးတွေကျတော့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့ကိုရောက်ရင်ကြောက်ပြ၊ စိုးထိတ်ပြတတ် တယ်။ အဲ့ဒါက ညှို့ချက် နံပါတ်သုံး “ဘယ”တဲ့။ (အားကိုးခံချင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအကြိုက်ပေါ့ဗျာ နောက်မှ(ညားပြီးမှ) မိန်းမကြမ်းကြီးဖြစ်နေတတ်မို့ သတိရှိ ဟိဟိ) ညို့ချက် (၄) တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန် လုပ်ပြတတ်တယ်။ လျှာတစ်လစ်ထုတ်ပြတတ်တယ်။
ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (၁၂) ရာသီဖွားများအတွက်(4.3.2018 မှ 10.3.2018) ဟောစတမ်း
Comments Off on ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (၁၂) ရာသီဖွားများအတွက်(4.3.2018 မှ 10.3.2018) ဟောစတမ်း
ဆရာစံဇာဏီဘို၏ (၁၂) ရာသီဖွားများအတွက်(4.3.2018 မှ 10.3.2018) ဟောစတမ်း မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀) အဘက်ဘက်မှကောင်းမည်။ အလှူအတန်းကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကိစ္စများအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်အနေအထားရှိမည်။ အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှ တိုးတက်မည်။ လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောကိစ္စများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရမည်။ မေတ္တာရေးကိစ္စများတွင် အဆင်မပြေမှုများလွှမ်းမိုးမည်။ အပြန်အလှန် စကားများရမည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်မည်။ ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆီထမင်း ငါးပုံပုံ၍လှူပါ။ မိဿရာသီ (မတျ ၂၁ မှ ဧပွီ ၂၀) အဘကျဘကျမှကောငျးမညျ။ အလှူအတနျးကိစ်စ၊ ဘာသာရေးကိစ်စမြားအတှကျ ဆောငျရှကျရနျအနအေထားရှိမညျ။ အပွိုငျအဆိုငျကွားမှ တိုးတကျမညျ။ လူမြိုးကှဲအကြိုးပေးမညျ။ ဆိုငျးငံ့ထားသောကိစ်စမြား ပွနျလညျဆောငျရှကျရမညျ။ မတ်ေတာရေးကိစ်စမြားတှငျ အဆငျမပွမှေုမြားလှမျးမိုးမညျ။ အပွနျအလှနျ စကားမြားရမညျ။ ပဋိပက်ခဖွဈပျေါမညျ။ ယတွာ ။
ကာမအားတိုးဆေးတွေကြောင့် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ ….. ?
Comments Off on ကာမအားတိုးဆေးတွေကြောင့် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ ….. ?
ကာမအားတိုးဆေးတွေကြောင့် ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ကာမအားတိုးဆေးဆိုတာ ကာမဆန္ဒကို မြင့်တက်စေတဲ့ အစားအစာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကုတင်ပေါ်မှာ ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားအများစုက အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ ဆေးကိုဝယ်မယ်၊ ပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ အချိန်ကြာကြာလေး ချစ်ပွဲဝင်မယ်၊ အဲဒီနည်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ယောက်ျားပီသမှုကို ခံစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်က ပါမောက္ခတွေကတော့ အဲ့ဖြစ်စဉ်တွေက ပန်းသေပန်းညှိုးလိုမျိုး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို နာနာကျင်ကျင် ခံစားရစေနိုင်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဆိုတာ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ ထောင်မတ်မှုမျိုးကို မရရှိတာ မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ သွေးတိုးနဲ့ ဆီးချိုလိုမျိုး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက ထိုဖြစ်ရပ်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကို မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပုစ္ဆာတွေပေးခဲ့သော လူ ( ၁၀ ) ဦး
Comments Off on ကမ္ဘာကြီးကို မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပုစ္ဆာတွေပေးခဲ့သော လူ ( ၁၀ ) ဦး
1. D.B. Cooper D.B. Cooperနိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ Dan Cooper လို့ ခေါ်ဝေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘိုရင်း ၇၂၇ လေယာဉ်ကို အပိုင်စီးပြီး သူ့မှာ ဗုံးကိုသယ်ဆောင်လာတယ်လို့ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ သူ့အတွက် ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းနဲ့ လေထီးလေးခု ပေးဖို့ တောင်းဆိုပြီး တောင်းဆိုမှုရတဲ့ ညသန်းခေါင်မှာ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ လေထီးနဲ့ခုန်ချ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ် ။ သူ့ကို ဘယ်တော့မှ ထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ဘယ်မှာမွေးတယ် ၊ ဘယ်သူ စသဖြင့်ကိုလည်း စုံစမ်းလို့မရပဲ လျှို.ဝှက်ဆန်းကြယ် လူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ရှိနေပါတော့တယ် ။ 2. Babushka
အရှုံးမပေးတဲ့ ၀ိညာဉ်” သီချင်းအခွေ ပရိုမိုးရှင်းပွဲ
Comments Off on အရှုံးမပေးတဲ့ ၀ိညာဉ်” သီချင်းအခွေ ပရိုမိုးရှင်းပွဲ
Myanmar Idol အဆိုတော် Billy လမင်းအေး ရဲ့ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီး “အရှုံးမပေးတဲ့ ၀ိညာဉ်” သီချင်းအခွေ ပရိုမိုးရှင်းပွဲကို မတ်လ (၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction City တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ credit; Myanmar Idol အဆိုတျော Billy လမငျးအေး ရဲ့ ပထမဆုံး တဈကိုယျတျော တေးစီးရီး “အရှုံးမပေးတဲ့ ၀ိညာဉျ” သီခငျြးအခှေ ပရိုမိုးရှငျးပှဲကို မတျလ (၃) ရကျနကေ့ ရနျကုနျ၊ Junction City တှငျ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ credit;
မယားငယ်ကို ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီး လာကြည့်ဖို့ ခင်ပွန်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တဲ့ မယားကြီး သတင်းနှင့် ရုပ်သံ
Comments Off on မယားငယ်ကို ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီး လာကြည့်ဖို့ ခင်ပွန်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တဲ့ မယားကြီး သတင်းနှင့် ရုပ်သံ
တရုတ်နိုင်ငံက မြို့တစ်ခုမှာ အသက်(၄၀)ကျော်ခန့် ရှိနေပြီလို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းမယားကို လူမြင်ကွင်းမှာ ဆံပင်ကိုဆွဲကာ ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ခင်ပွန်းသည်ကိုလည်း မယားငယ်ကို သူမက ဘယ်လိုနှိပ်စက်နေသလဲဆိုတာကို လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၈)ရက်က Luannan ကောင်တီအတွင်းက လမ်းမကြီးတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ အသက် (၂၅)ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တိတ်တိတ်ပုန်းဖောက်ပြန်နေတာ သုံးနှစ်ကျော်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ မယားငယ်ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဖမ်းမိသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ သတင်းမှာ ရှင်းပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗွီဒီယိုထဲမှာ မယားကြီးဖြစ်သူက သူမရဲ့ကားအနီးမှာ မယားငယ်ကို ဆံပင်တွေဆွဲကာ ရိုက်နှက်ခဲ့ပုံကိုထောက်ရင်၊ မယားငယ်နောက်ကို ကားနဲ့ တရစပ်လိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ သူမက မယားငယ်ကို စိတ်ရှိလက်ရှိ
ရွှေဆိုင်မှာ မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့ ဝန်ထမ်းမ ကို ငွေထုပ်နဲ့ကောက်ပေါက်ခဲ့
Comments Off on ရွှေဆိုင်မှာ မဝယ်နိုင်ဘူးလို့ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့ ဝန်ထမ်းမ ကို ငွေထုပ်နဲ့ကောက်ပေါက်ခဲ့
ဆေးဘဲဥ (CENTURY EGG)ကိုစားသင့်သလား
Comments Off on ဆေးဘဲဥ (CENTURY EGG)ကိုစားသင့်သလား
ဆေးဘဲဥကို century egg,preserved egg,hundred year egg, thousand year egg, millennium egg ,ထုံးဘဲဥ , ဖီတန် ( တကယ်တော့ တရုပ်လို နာမည်ပါ pidan ) လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဟိုတလောက maggi လို့ ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက် တွေထဲမှာ ခဲဓာတ်တွေ (lead) ပါတာများတာကို အိန္ဒိယမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ လို့ မက်ဂီး ခေါက်ဆွဲတင်သွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆေးဘဲဥကို သတိရမိလို့ ဆေးဘဲဥအကြောင်းလေးမျှဝေဖြစ်တာပါ။ ဆေးဘဲဥကိုတရုတ်နိုင်ငံက နေပြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး ရိုးရာ အားဖြင့် ဘဲဥ ၊ကြက်ဥ နဲ့ ငုံးဥတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ရွံ့မြေ ၊ ဆား၊ ထုံး၊ ထမင်း ပျော့
ပွဲကြည့်သွားမယ်ပြောပြီး ကြိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်သွားတဲ့ (၁၇) နှစ် (၁၈) နှစ် ရည်းစားစုံတွဲ
Comments Off on ပွဲကြည့်သွားမယ်ပြောပြီး ကြိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်သွားတဲ့ (၁၇) နှစ် (၁၈) နှစ် ရည်းစားစုံတွဲ
တောင်ဝိုင်းတောင်ခြေတွင် သမီးရည်းစားနှစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံး ဘားအံ မတ်လ ၄ ကရင်ပြည်နယ်၊ နောင်ပလိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံတားဦးကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ဝိုင်းတောင်ခြေတွင် မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်က လူနှစ်စုံတွဲနှစ်ဦး ကြိုးဆွဲချ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ နောင်ပလိန် ကျေးရွာအုပ်စု တံတားဦး ကျေးရွာနေမောင်စောသန်းဦး (ခ) ကျော်ဖိုးအဲ (သ) ၁၈ နှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ၎င်းနှင့် ရီးစားဖြစ်နေသူ နောင်ပလိန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ဖလဲ ကျေးရွာနေ နန်းဝါဝါခိုင် (ခ) နော်ကလောင်ကလိုင်း (သ) ၁၇ နှစ်အား ပွဲကြည့်ရန်ဟုပြောဆိုခေါ်ယူ၍ထွက်သွားရာမှ တစ်ညလုံး ပြန်ရောက်လာခြင်းမရှိပဲ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ၁၁ အချိန်ခန့်တွင် တောင်ဝိုင်းတောင်ခြေရှိ